RASMI: Barcelona oo ka hadashay nooca uu yahay dhaawaca soo gaaray Philippe Coutinho – Gool FM
(Barcelona) 30 Dis 2020. Ciyaaryahanka reer Brazil ee Philippe Coutinho ayaa dhaawac muruqa ah kasoo gaaray jilibka bidix, sida lagu sheegay warbixin caafimaad oo ay shaacisay Barcelona maanta oo Arbaca ah.
Philippe Coutinho ayaa isaga baxay kulankii xalay ku dhex maray kooxaha Barcelona iyo Eibar, horyaalka La Liga ee dalka Spain, kaddib markii uu dhaawacmay.
Kooxda Barcelona ayaa bayaan rasmi ah oo ay soo saartay, waxay ku sheegtay:
“Baaritaanada caafimaad ee lagu sameeyay Philippe Coutinho, waxay muujineysaa in ciyaaryahanka uu dhaawac ka soo gaaray miskaha kore ee jilibka bidix, waxaana uu mari doonaa qaliin maalmaha soo socda.”
Qaliinka uu mari doono Philippe Coutinho ayaa waxay la micno tahay inuu garoomada ka maqnaan doono muddo dhan ilaa 4 bilood, waana xiddigii labaad Barca ee gala qolka qalliinka xilli ciyaareedkan, kaddib Ansu Fati.
Philippe Coutinho ayaa ka qeyb qaatay 14 kulan xilli ciyaareedkan, wuxuuna dhaliyay 3 gool, isagoo caawiyay 2 gool kale, shaki la’aanna, dhaawiciisu wuxuu dhabar jab cusub ku noqon doonaa qorshooyinka tababare Ronald Koeman iyo Barcelona, ​​oo kaalinta lixaad kaga jira kala sarreynta horyaalka Spain.
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Newcastle United iyo Liverpool ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey